ALIEXPRESS ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူ AliExpress သည့်အချိန်တွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့သင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်ကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူး function ကို Deactivate ပရိုဖိုင်းကိုလည်းမရှိ။ function ကိုတည်ရှိရာကအတော်လေးဝယ်လိုအားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအားလုံးအောင်မြင်စွာမတှေ့။
AliExpress အပေါ် Deactivate ပရိုဖိုင်း၏အကျိုးဆက်များ:
အသုံးပြုသူတစ်ဦးဝေးလံသောအကောင့်ကို အသုံးပြု. ရောင်းသူသို့မဟုတ်ဝယ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမသုံးနိုငျသညျ။ သငျသညျအရောင်းအများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းကိုဖန်တီးရန်ရှိသည်။
အရောင်းအအကြောင်းကိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်ဖျက်ပါမည်။ ဤသည်မှာလည်းမရတဲ့ဝယ်ယူမှုသက်ဆိုင် - အမိန့်အပေါငျးတို့သဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
all posts များနှင့်ရာထူးနှင့် AliExpress အပေါ်နှင့် Alibaba.com အပေါ်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်လက်ခံရရှိ, အပြီးအပိုင်ဖျက်လိမ့်မည်။
သတင်းအချက်အလက်တိကျ, ဒါပေမယ့်သို့ရာတွင်လည်းဖျက်သိမ်းအမိန့်ထံမှရန်ပုံငွေများ၏ပြန်လာဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်အကြံပြုသည်။ အဘယ်သူမျှမ ဤအရာအလုံးစုံအခြေအနေများအသုံးပြုသူတွေနဲ့ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲလျှင်, သင်ဖယ်ရှားဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
အဆင့် 1: အဆိုပါ function ကို Profile ကိုရပ်တန့်ထားသည်
အချက်အလက်များ၏ရည်ရွယ်တဲ့ဖျက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်, function ကို AliExpress ပေါ်တွင်ပရိုဖိုင်းကို setting တွင်နက်ရှိုင်းသောဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။
ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ AliExpress ပေါ်တွင်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုသှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် cursor အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိပရိုဖိုင်းကိုညွှန်ပြနဲ့ပေါ့ပ်အပ် menu ကိုခေါ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကို select ချင် "AliExpress ဖွငျ့အကြှနျုပျ"။ ၏သင်တန်း, ထိုမတိုင်မှီသင်ဝန်ဆောင်မှုကို log in ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင်ကို select ဖို့လိုအပ်စာမျက်နှာ၏အနီရောင်ဦးထုပ်ထဲမှာ "ကိုယ်ရေးဖိုင် Settings" ကို.
ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသောမီနူးကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစာမျက်နှာတွင်။ အပိုင်းရှိတယ်လိုအပ်ပါတယ် "ပြောင်းလဲခြင်း settings ကို".
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုရှေးခယျြစရာပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူသီးခြား menu ကိုဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါအုပ်စုသည် "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ" သငျသညျကို select ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Edit Profile".
တစ်ဦးက window ကိုသူဝန်ဆောင်မှုဒေတာဘေ့စဝင်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်။ အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ဦးကမ္ပည်းလည်းမရှိ "ငါ့အကောင့်ကိုပိတ်"။ သူမသည်ပရိုဖိုင်း၏ဖယ်ရှားရေးများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
ကိုသာသင့်လျော်သော form မှာဖြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 2: ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပုံစံဖြည့်ပါ
လက်ရှိတွင်ဤပုံစံအင်္ဂလိပ်လိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုလည်းလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်အဖြစ်ဆိုက်၏ကျန်။ ဒီနေရာတွင်လေးအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်လိုအပ်သည်။
ပထမဦးဆုံးအညီသင်သင့်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပေါ်တွင်သင်၏ e-mail, ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာခြေလှမ်းကိုသင်သေချာအသုံးပြုသူကိုသင်ပိတ်ထားချင်သောပရိုဖိုင်း၏ရှေးခယျြမှုနှင့်အတူတစ်ဦးအမှားလုပ်မပေးတော်မူကြောင်းကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒုတိယလိုင်းတစ်ခုရေခဲရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "ငါ့အကောင့်ပိတ်"။ ဤသည်အတိုင်းအရှည်ဝန်ဆောင်မှုသေချာအသုံးပြုသူသံကိုစိတျထဲတှငျသည်နှင့်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းငှါအခွင့်ပါလိမ့်မယ်။
တတိယခြေလှမ်း - သင်သည်သင်၏ account ကိုမဖျက်ပစ်ဘို့အကြောင်းပြချက်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာစစ်တမ်းဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန် AliExpress အုပ်ချုပ်ရေးလိုအပ်ပါသည်။
"ငါသည်အမှားအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးငါသည်ဤအကောင့်မလိုအပ်ပါဘူး" - ဤအကောင့်အမှားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်, ငါမလိုအပ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအဆန်းမဟုတ်ကတည်းကအများဆုံး, option ကိုရွေးချယ်တော်မူ။
"ကျွန်မရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီမတှေ့နိုငျ" - ငါသည်ငါ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်သူကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။
ဒီ option ကအများဆုံးမကြာခဏအလီများအတွက်ကုန်စည်၏လက္ကားထောက်ပံ့ရေးသူ့ရဲ့မိတ်ဖက်ရှာနေကြသူစီးပွားရေးသမားများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမကြာခဏလည်းအသုံးပြုသည်နှင့်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်သောအရာကိုမတှေ့ဘူးသူဖောက်သည်များနှင့်ထို့ကွောငျ့မရှိတော့တစ်အွန်လိုင်းစတိုးကို အသုံးပြု. စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။
"ငါသည် Aliexpress.com ကနေသိပ်အများကြီးအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိ" - ငါ AliExpress ကနေသိပ်အများကြီးအီးမေးလ်များလာပြီပေါ့။
AliExpress အားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ် spam များကိုငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဆန္ဒနေသောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သော။
"ငါသည်တော့ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာမအငြိမ်းစားတယ်" - ငါလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအဖြစ်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်။
ရောင်းအားကျင်းပရန်တာတွေရပ်စဲတဲ့သူရောင်းသူများအတွက် option ။
"ငါသည် scammed ခဲ့သည်" - ငါလှည့်ဖြားခဲ့သည်။
ကြောင့်မမျှတခြင်းနှင့်ဆိုးရွားသောရောင်းသူ၏စည်းစိမ်အလီရန်၎င်း၏လူကြိုက်များတယ်သောဒုတိယအများဆုံးမကြာခဏရွေးကောက်တော်မူ option ကို။ အများစုကတော့အမိန့်ပေးချေရသေးတဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူများကဖော်ပြသည်။
"ကျွန်မရဲ့ Aliexpress.com အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည့်အီးမေးလ်လိပ်စာမမှန်ကန်" - မှားယွင်းနေငါမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့အသုံးပြုပါ E-mail လိပ်စာ။
ဒီ option ကသင့်အကောင့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်စာလုံးပေါင်းအမှားက e-mail ကိုလိပ်စာများ၏နိဒါန်းစဉ်အတွင်းခဲ့ဘယ်မှာအခြေအနေများအဘို့သင့်လျော်သည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူကိုသူတို့က e-mail ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ရှိရာကိစ္စများတွင်လည်းအသုံးပြုပါသည်။
"ကျွန်မရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီမယ့်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်" - ငါသည်ငါ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမယ့်ထုတ်လုပ်သူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမိတ်ဖက်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်သောအခါ, အထက်ဂျ reverse, ထို့ကြောင့်မဟုတ်တော့န်ဆောင်မှု AliExpress လိုအပ်ပါသည်။
"ဝယ်သူများပေးသွင်းငါ၏အမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး" - ရောင်းအားနှင့်ဝယ်လက်ငါ၏အမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတုံ့ပြန်ကြပါဘူး။
အလီမှဖောက်သည်များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သို့ လာ. , ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကသွားကြဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်နိုင်သည့် Option ကိုရောင်းသူ။
က "Other" - နောက်ထပ် option ကို။
အဆိုပါပရိုဖိုင်းကိုဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့ service ကို AliExpress အသုံးပြုရန်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။